Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment हिन्दूधर्ममा मंगलबार किन विशेष छ ? - Pnpkhabar.com
हिन्दूधर्ममा मंगलबार किन विशेष छ ?
हिन्दूधर्मअनुसार मंगलबार विशेष गरी गणेश भगवानको पूजाआराधना गरिन्छ । साथै यस दिन काली माता, दुर्गा माता र हनुमानको पनि पूजा गरिन्छ । यस दिन व्रत बस्दा बिहानको खाना खानु हुँदैन भने साँझको खानामा नुन मिसाउनु हुँदैन ।
सबै किसिमको सुख प्राप्त गर्न, रक्तविकार शमन गर्न, शत्रु दमनका निम्ति, स्वास्थ्य रक्षार्थ तथा पुत्र प्राप्तिका लागि मंगलबारको व्रत उत्तम मानिन्छ । यो व्रत शुक्ल पक्षको पहिलो मंगलबारबाट शुरु गर्नु राम्रो मानिन्छ । यो व्रत कम्तिमा २१ वटा मंगलबारसम्म लिने प्रचलन छ भने सकेसम्म जीवनभरी नै लिए अझ राम्रो हुन्छ ।
मंगलबारको व्रतमा गहुँ र सख्खरको भोजन गर्नुपर्ने हुन्छ भने रातो कपडा धारण गर्नु पर्छ । मंगलबारको व्रतबाट मंगल ग्रहको अनिष्ट फल पनि शान्त हुन्छ । गणेश भगवानको आराधना गर्दा ‘ऊँ भौमाय नमः’ ५ माला जप गर्नुपर्दछ । पूजा गर्दा रातो फूल, फल, तामा, नरिवल आदि फल दान गर्नु पर्दछ ।
यसका साथै मंगलबारको दिन हनुमान जीको उपासनाका लागि उत्तम मानिन्छ । हनुमान वास्तवमा मंगलको पनि अरिष्टदेवता हुन् । हनुमानलाई ‘सर्वग्रहविनाशिने’ र ‘रक्षोविद्यवंशकारकाये’ भनि पुकारिन्छ । सबै ग्रहभन्दा बलवान हनुमान रहेको धार्मिक तथा पौराणिक कथाहरुमा उल्लेख छ ।
एक निश्चिल हृदय (छलकपटरहित) का देवताका रुपमा हनुमानलाई लिइन्छ । जीवनभर अविवाहित रही ब्रह्मचार्य प्राप्त योगी अथवा साधुको रुपमा पनि हनुमानलाई चिनिन्छ । मंगलबारको व्रत कथामा एक ब्राह्मणीले हनुमानको उपासना गरेकै कारण ‘मंगल’ नामक पुत्र प्राप्त गरेको धार्मिक कथामा उल्लेख छ ।
गीता जयन्ती मनाइयो
विवाह पञ्चमी आज, सीता र रामको पूजा गरी मनाइँदै
आज बालाचर्तुदशी, पितृ मोक्षका लागि शतविज छर्ने दिन
बालाचतुर्दशी आजदेखि मनाईँदै
कति छ आज बजारमा सुन चाँदीको मुल्य ?
भोलि सार्वजनिक विदा छैन : गृह मन्त्रालय
अपहरणको आरोप लागेका ज्योतिष अर्जुन क्षेत्रीले खोले मुख
नयाँ सभामुख को दाैडमा नेकपाका यी नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा
हात्तीको आक्रमणबाट दुईको मृत्यु
रु तेह्र लाखसहित बाबुछोरा पक्राउ
करणी प्रयासको आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ
सरकार खेलकूद क्षेत्रलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री ओली
१२३ स्थानीय तहका शिक्षकको दरबन्दी मिलान
ठगी गर्ने म्यान पावरलाई कानूनको दायरामा ल्याउँछौँः श्रममन्त्री यादव
नेप्से दोहोरो अङ्कले बढ्दा कारोवार रकम ५५ करोड नाघ्यो
सागमा सेनाका खेलाडीको योगदान : २३ स्वर्णसहित १०३ पदक